PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2017-10-22 - Ake kubhekwe umthetho ngolukaZuma
Ake kubhekwe umthetho ngolukaZuma
Isolezwe ngeSonto - 2017-10-22 - IMIBONO -
NOMA ngabe yisiphi isinqumo esigcina sithathwe abezokuShushiswa koMphakathi kuleli ngamacala angu-18 athinta uMengameli Jacob Zuma kumele kucatshangelwe ukusebenza komthetho.
Isinqumo seNkantolo yokuDlulisa amaCala esinqumeni sayo iveze kwacaca ukuthi isinqumo esathathwa ngowayeyinhloko yezokushushiswa phambilini u-Adv Mokotedi Mpshe sasingaphusile neze.
Ziningi izizathu asekwazile ukuqhamuka nazo uZuma ukuthi lolu daba lwakhe lungaphethi ngokuthi ashushiswe. Esinqumweni afinyelela kuso uMpshe wancika kakhulu ebufakazini obagcina baziwa ngokuthi “ama-spy tapes”, imibiko eqoshiwe enezobunhloli, okuthiwa ayewubufakazi bokuthi uphiko lwezokushushiswa lwalunomkhankaso othile lusetshenziswa abaholi abathile bepolitiki ukuqinisekisa ukuthi uZuma akanyukeli esikhundleni akuso njengamanje.
Noma ngabe lo mkhankaso wawukhona, kuyacaca ukuthi awusebenzanga. Okwesibili akukho lapho kungavezwa khona ukuthi izinsolo zala macala abhekene nawo uZuma umsulwa noma vele wawenza ngoba akakaze abe nethuba lokugeza igama lakhe enkantolo.
Ikhona imibono eveza ukuthi kungaba wubudedengu ukushushisa umengameli esesikhundleni ezweni, kungenza isimo sibe mazonzo kusukela kwezomnotho nezokuphepha.
Lesi yisizathu esizwakalayo. Nokho uma kungukuthi wonke umuntu uyalingana phambi komthetho futhi akukho ukwenzelela, kungaba ukusebenza okuhle komthetho nokwethenjwa kwezobulungiswa kuleli uma enganikwa ithuba lokugeze igama lakhe.
Kusukela ngoJuni 14, 2005, exoshwa esikhundleni sokuba yiPhini likaMengameli, ngowayenguMengameli uMnuz Thabo Mbeki, uZuma ulokhu elandelwe yiphunga lenkohlakalo. Ukulahlwa yicala lenkohlakalo kowayengumeluleki wakhe wezemali uMnuz Schabir Shaik kwaqinisa kakhulu izinsolo ngobugwegwe bakhe.
Okubi ngazo zonke lezi zinsolo ziqhubeka ingekho inkundla enobulungiswa njengenkantolo lapho kubekwa izinsolo ezithebeni, osolwayo aziphendulele.
Sibona sekuyithuba leli.